I-Tanjil Creek Lodge-Intofontofo kwiiAlps (Amagumbi 1-4)
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguTania
Indawo yokulala ezi-4 / igumbi lokuhlambela eli-4 lamkelwa njengexabiso leprimiyamu, iLoji yabucala eMt Baw Baw, elala abantu abali-17, enemibono emihle. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo lile mihla, inazo zonke izixhobo zombane ezibandakanya idishwasher kunye nomatshini wekofu. I-Lounge ijonge ipaki ye-toboggan kwaye inomlilo we-gas log kunye ne-TV enkulu yesikrini kuquka ne-netflix kunye ne-Wi Fi yamahhala. Ilinen & iitawuli zibonelelwa unyaka wonke kwaye kukho neGumbi lokomisa.
I-Lodge ifakwe kwii-Snowgums kunye namatye amakhulu e-granite. Wonke umntu uyakuthanda ukubukela ikhephu lijika ihlabathi libe yiWinter Wonderland, OKANYE ukuvuka, jonga ihlathi elishinyeneyo lealpine.
I-Wi-Fi yasimahla iyafumaneka kwindawo yokulala. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inendawo yokutyela ethandekayo, yoNyaka wonke, enekofu entle, kwaye iHotele yeAlpine ngexesha eliMhlophe ibonelela ngokutya okumnandi kweBistro. Kukho iindawo ezimbini zokuQeshwa kwe-Ski e-Mt Baw Baw eziqesha iimpahla kunye nezixhobo ngamaxabiso akhuphisanayo kakhulu.
Azikho zininzi izindlu zokuhlala e-Mt Baw Baw kwaye oku kongeza 'kwindalo yebhoutique' yeNdawo ekuchithelwa kuyo iiholide. Indawo ekuchithelwa kuyo iiholide inendawo yokutyela ethandekayo, yoNyaka wonke, enekofu entle, kwaye iHotele yeAlpine ngexesha eliMhlophe ibonelela ngokutya okumnandi kweBistro. Kukho iindawo ezimbini zokuQeshwa kwe-Ski e-Mt Baw Baw eziqesha iimpahla kunye nezixhobo ngamaxabiso akhuphisanayo kakhulu.
Sihlala ngokusisigxina kwilali iMount Baw Baw kwaye sinokunika uncedo 24/7